I-OUKITEL K6, umona ophakathi kuluhlu | I-Androidsis
I-OUKITEL K6, umona ophakathi kuluhlu
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiselfowuni, I-Oukitel
Ngaba awukava nge-OUKITEL K6 okwangoku? Umzi-mveliso we-OUKITEL yinto yokwenene engapheliyo. Kunqabile yiveki apho kungafuneki ukuba sikuxelele ngesixhobo esivela kule nkampani. Kwaye kukuba ekusebenzeni okungapheliyo ukwenza izixhobo ezintsha, ngakumbi nangakumbi iimodeli zale femu zithatha imarike.
Este I-OUKITEL K6 ibizwa ukuba ibe yenye yezona «zithengisa kakhulu» Ukutyikitywa konyaka ozayo. Ngokwenene 'ngaphezulu komgca' weempawu, iya kubetha kwimarike kwakhona ukuze kuqhume amaxabiso. Kukho iinkampani ezininzi ezinkulu ezibukela ukumiliselwa kwe-OUKITEL nganye entsha ngokukrokrela.
1 Ngaba i-smartphone enamandla anjalo ngaphakathi komntu wonke?
2 Nge-OUKITEL K6 uya kuphatha ikhamera yokwenyani
3 Ibhetri ye-OUKITEL K6 ayiyi kukushiya ngaphandle komdlalo
Ngaba i-smartphone enamandla anjalo ngaphakathi komntu wonke?
Ukuba kulo naluphi na uphawu lwe-OUKITEL lubalasele kwintengiso yangoku, yeyokubonelela ngezixhobo zokusebenza okuphezulu ngamaxabiso afikelelekayo. Ngesi sizathu, ukubheja ngakunye kwale nkampani kuphakamisa ulindelo oluphezulu kuluntu ngokubanzi. Nge-OUKITEL K6 sijamelene nerhamncwa lokwenyani eliza kukothusa ukusebenza kwalo.
Kubonakala ngathi kungekudala, ukufumana isixhobo esinamandla ngokwenene, kuye kwafuneka siye phezulu kuluhlu. Kwaye asikasetyenziselwa ukufumana ii-smartphones eziphakathi kwinqanaba elinamandla ngakumbi kunabanye abaphindaphinda amaxabiso abo. I-OUKITEL K6 ine-6 ​​GB yememori ye-RAM. Into ebonakala ngathi ayinakufikeleleka phakathi kuluhlu lwe-smartphone. Kwaye i-OUKITEL yenza ukuba zifikeleleke kuzo zonke iipokotho.
I-OUKITEL K6 yenye yee-smartphones zokuqala kwintengiso ukubonisa iMediaTek chip entsha. IHelio P-23. Inkqubo Ukusebenza kwe-Octa-core kwi-2 GHz.I-GPU yayo, iMali-G71-mp2, inakho ukubonelela nge-10% yamandla ngakumbi kunye ne-15% yokusebenzisa ibhetri kancinci kunangaphambili. Ukongeza, eyabo 64 Gb yokugcina, yenze ibe sisilo sokwenene. Akuyi kubakho kusebenza okanye ukwenza imisebenzi emininzi enokuxhathisa i-OUKITEL K6.
Nge-OUKITEL K6 uya kuphatha ikhamera yokwenyani
I-K6 entsha iza kuza neekhamera zokwenyani. Ngaba awukahlali umhlala-phantsi kowakho okwangoku? Kumqolo wayo iya kuba ne- ikhamera ezimbini ezigcina inzwa ye-21 Mpx kunye nenye ene-8 Mpx. Kwaye ngaphambili, nayo Iikhamera ezimbini ezixhotyiswe nge-13 Mpx sensor kunye ne-8 Mp sensorx. Akuyi kubakho kubanjwa okunokusichasa. Nokuba kwikhamera yayo ye-selfie inika isisombululo esiphezulu kunezinye kwiikhamera zayo eziphambili.
Ikhamera yayo yangaphambili, ukongeza ekuthatheni iiselfie ezigqwesileyo, iyakudlala indima ebalulekileyo kwicandelo lokhuseleko. Iimpawu ze-OUKITEL K6 a isivamvo somnwe ngasemva kwayo. Ibekwe nje ngezantsi kweilensi ezimbini zekhamera yakho, indawo entle. Kodwa ikwanayo nenketho yokuvula ngokuchongwa kobuso, i Itekhnoloji ye-ID yobuso. Umnwe wakho kunye nobuso bakho ziya kuba zizitshixo zokufikelela kwi-smartphone yakho.
I-OUKITEL K6 iyaqhayisa ngokuba I-smartphone yokuqala eneprosesa yeHelio P23 yokufaka umsebenzi weNFC. Ungasebenzisa i-smartphone yakho ukwenza iintlawulo okanye ukuthengiselana ngebhanki, kunye nokulawula imisebenzi ye-automation yasekhaya. I-K6 ikunika okungaphezulu kunoko kwenziwa yifowuni eqhelekileyo.
Ibhetri ye-OUKITEL K6 ayiyi kukushiya ngaphandle komdlalo
Ukufikelela kwisiphelo se-smartphone ekwaziyo ukubonelela kakhulu, ibhetri yayo ikwakhona nomsebenzi. I-OUKITEL K6 inenqaku elikhulu I-6.000 mAh ibhetri. Isikhundla esithembisa ukusinika ukuzimela ukuya kuthi ga kwiintsuku ezintathu ezipheleleyo. Omnye umzekelo wokuba ibhetri yenye yezinto kunye negumbi elikhulu lokuphucula i-smartphone yangoku. Kwaye ine Ukugcina ibhetri enkulu kunye nemowudi yenkqubo yokutshaja ngokukhawuleza. Ngaphandle kwamathandabuzo, inkalo ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kwaye iya isiba ngakumbi nangakumbi ngokubaluleka.
Sijongene ne-smartphone enamandla, ngakumbi kuninzi lwee-smartphones esinokuzifumana ngoku nakweyiphi na ifemu. Ukufakwa kwento entsha ye-Helio P23 chip, i-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB ye-RAM, ayizukubonwa. Ngekhamera enezisombululo kunye neempawu ezenza ukuba ibe yinxalenye ebalulekileyo yale smartphone ingakholelekiyo. Kwaye ibhetri ekwaziyo ukugcina yonke into isebenza kakuhle kangangoko kunokwenzeka.
Ukuze i-K6 ikhanye njengoko kufanelekile ukusebenza kwayo, i-OUKITEL ilithathele ingqalelo icandelo loyilo. Ke, silapha ngaphambili I-smartphone eyakhiwe ngezinto ezisemgangathweni ezigqityiweyo. Kwicandelo langaphambili libonakala likhulu kakhulu Iscreen se-intshi eyi-6 ngesisombululo esipheleleyo seHD, kunye nefomathi yesikrini 18: 9. Kwaye konke oku ngaphandle kokujonga isixhobo esinomzimba ubungakanani be-smartphone esine-intshi ye-5,5-intshi.
Ukuba i-OUKITEL K6 ikuqinisekisile, apha sikuphathela into enokukunceda. Phambi kokuba intengiso yefowuni iqale jikelele I-OUKITEL ilungiselela ukhuphiswano. Uya kulungelwa amabhaso amathathu ahlukeneyo. A ifowuni yasimahla, iinketho ezintandathu ukwazi ukuyithenga ngexabiso lesiqingatha. O Iikhowudi zesaphulelo ezixabisa i-70 yeedola. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngena apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL K6, umona ophakathi kuluhlu
Ndijonge iBlackview S8 ehambelana nale nto ndiyifunayo ngexabiso, nge- € 127 kubonakala kumangalisa.
IiNkqubo ezili-10 eziphezulu ze-2017
Uhlobo lweBrutal Arkanoid isitayile 2017 !!